Akubona bonke abasebenzisi abakwazi ukuphatha ikhompyutha yomuntu siqu ezingeni abangathanda. Wonke umuntu unemfihlakalo: othile uvakashela amasayithi angavunyelwe, othile usebenzisa ikhompyutha ngezinhloso ezithile kunesikhathi sokusebenza, othile ufihla futhi engathandi uma abasebenzisi beqembu lesithathu befunda mayelana nokuphathwa okusebenzayo kwi-PC.
Isitha esiyinhloko sabasebenzisi bokugcina yimibhalo yamuva. Abanye abasebenzisi bavala umsebenzi, kodwa labo abazi ngokuhlala kwawo. Okufanayo kuya kuziphequluli. Lapho usebenza ne-Inthanethi, wonke amakhasi avakashelwa agcinwa emlandweni.
Ukukhipha ukwakheka kwayo, ungahlela isiphequluli se-WEB ngendlela ekhethekile. Enye indlela ukususa unomphela umlando ukuze abanye abasebenzisi bangakwazi ukuthola izinsiza ozivakashele.
Kukhompyutha ye-Windows 7, amadokhumende asanda kulungiswa kanje.
Emenyu ye "Qala", izakhiwo zifakwe inkinobho yegundane kwesokudla. Ewindini ebonakalayo, chofoza inkinobho ethi "Izilungiselelo" bese uya kuthebhu "Okuthuthukisiwe". Lapha kufanele uthole isigaba esithi "Amadokhumenti Kamuva" futhi usethe noma usule ibhokisi lokuhlola. Isheke libonisa uhlu lwamadokhumenti, futhi ukungabikho kwalo kungabandakanyi lo msebenzi.
Ukuze ufake uhlu lwamadokhumenti, udinga ukushayela imenyu yokuqala bese uya kufolda yamadokhumenti wakamuva. Uma ufuna ukususa amafayela akhiqiziwe, bese ukhetha nje ingxenye yohlu noma uhlu lonke bese ucindezela ukhiye we-Susa.
Uma kwenzeka izinkinga, amadokhumenti wakamuva we-Windows 7 asekelwa ngokusisiza ngokuxazulula izinkinga. Ukuqeda, ungasebenzisa isixhumanisi esikhethekile. Embukisweni womusha wefayela wokulanda , chofoza inkinobho ngegama elithi "Run" futhi ulandele imiyalelo yesistimu yokusebenza yokuxazulula izinkinga zewizard ezivele.
Ngeshwa, i-wizard itholakala kuphela ngesiNgisi, ngakho-ke kufanele ube nolwazi oluyisisekelo lokusebenzisa leli thuba. Noma kunjalo, abathuthukisi besistimu yokusebenza banikeza inketho ehlukile yokubuyisela ukusebenza okujwayelekile lapho umsebenzi "Amadokhumenti wakamuva" ehluleka.
Uma ungakwazi ukususa uhlu ngendlela evamile, ungasebenzisa ibhokisi lengxoxo elifanayo ongayilungisa ukwakheka kwamadokhumenti. Ukuze wenze lokhu, kuthebhu ethi "Okuthuthukisiwe", udinga ukuya esigabeni semibhalo yamuva bese uchofoza inkinobho ukuze ususe uhlu. Kumele kuqashelwe ukuthi akukho mafayela kanye namafayela e- multimedia asusiwe, futhi kuphela uhlu lwama-"Amadokhumenti Kamuva" oluzosuswa.
Uma kunesidingo sokwakha uhlu lwezinhlelo ezizokwenza noma, ngokuphambene, ungangeze ulwazi ohlwini lwamadokhumenti wakamuva, ukuze kube lula, udinga ukusebenzisa usesho lweMenyu yokuqala bese ulungisa izinsiza ngokufanele.
Uma ungeke ukwazi ukuxazulula izinkinga ngokubonisa uhlu lwamadokhumenti ngokwakho, kungcono ukuxhumana nokwesekwa kwezobuchwepheshe kunoma iyiphi indlela elula. Ochwepheshe bazophendula yonke imibuzo futhi banikeze izincomo.
Kubalulekile ukuthi ungapheli amandla okubhalisa kwekhompiyutha ngenani elikhulu lezinhlelo ezidalwe ukuthi zikhululekile ukusebenza ne-OS. Ezinye zazo zinonya futhi zenzelwe ukukhohlisa abasebenzisi, futhi hhayi ukusiza ukuxazulula izinkinga.
Mayelana nendlela yokubuyisela amafayela ngemuva kokufometha i-hard drive
Yini Amavithamini eziqukethwe emafutheni zemifino? Ukusetshenziswa amafutha yemifino
Umthandazo St uMarta, Thandaza, futhi zonke zizogcwaliseka
Uhlobo isebenza "The Adventures of Tom Sawyer." Multigenre njengophawu zabuna okusezingeni eliphezulu
Tours ngoNovemba kwa-Israyeli. Israyeli ngo-November: namazwana ngesimo sezulu. Amaholide kwa-Israyeli ngo-November
Ukuxazulula Linear Izibalo
Kungakanani igazi ulahlekelwa owesifazane esesikhathini?
Cerebral palsy, izimpawu, nesenzakalo indlela izimbangela